Sajhasabal.com | Homeदिल्ली मुम्बईसँग पराजित, कुन टिम कतिऔं स्थानमा ?
दिल्ली मुम्बईसँग पराजित, कुन टिम कतिऔं स्थानमा ?
असोज २५, काठमाडौँ | आइपीएल सिजन १३ अन्तर्गत आइतबार राति भएको २७ औं खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले दिल्ली क्यापिटललाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ । साथै शिर्ष स्थानमा रहेको दिल्लीलाई दोश्रो स्थानमा झार्दै मुम्बई शिर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले दिएको १ सय ६३ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले १९.४ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गर्दै दिल्लीलाई पराजित गरेको हो ।
मुम्बईले अन्तिम ओभरमा जितको लागि ७ रन आवश्यक हुँदा पहिलो बलमा चौका, दोस्रोमा एक रन, तेस्रोमा एक रन र चौथो बलमा चौका प्रहार गर्दै जित दिलाउन सफल भएको हो ।
दिल्लीले अब बुधबार राजस्थान रोयल्ससँग खेल्नेछ । त्यस्तै मुम्बईले शुक्रबार कोलकाता नाइट राइडर्ससँग खेल्ने छ ।
हेर्नुहोस् आइपिएलको अंक तालिका
यो जितसँगै मुम्बई ७ खेलमा ५ मा जित र २ मा हार सहित १० अंकका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । दिल्लीको पनि ७ खेलमा ५ मा जित र २ मा हार सहित १० अंकनै भएपनि नेट रन रेटको आधारमा दोस्रो स्थानमा छ । कोलकाता ६ खेलमा ४ जित र २ मा हार सहित तेस्रो स्थानमा छ ।
त्यस्तै बेंगलोर ६ खेलमा ४ मा जित र २ मा हार सहित नेट रन रेटको आधारमा चौथो स्थानमा छ । सनराइजर्स हैदराबाद ७ खेलमा ४ मा हार र ३ मा जित र हार सहित पाँचौ स्थानमा छ । राजस्थान ७ खेलमा ४ मा हार र ३ मा जित सहित छैटौं स्थानमा छ ।
त्यस्तै चेन्नई सुपर किंग्स ७ खेलमा ५ मा हार र २ मा जित सहित छैटौं स्थानमा छ । किंग्स इलेभेन पन्जाब ७ खेलमा ६ मा हार र १ मा जित सहित २ अंक जोड्दै सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा छ ।